Chikunguru 4, 2018 arun
Coinbase kukamba nemumwe nezvimwewo akabhadhara $ 80k hwakanaka kuisa mutengi yesangano pangozi
Cryptocurrency Exchange uye brokerage hofori Coinbase onboarded 10 vatengi zvawo itsva zvechechi-vegiredhi muchitokisi basa. zvisinei, zvakasimba kuti shamwari iri asingashumbi hake, Electronic mutengapwe Kubvisa marara (nezvimwewo), mumwe bhuroka-munyengeri kare kushanda sechinhu zvechechi zvirambe zviripo, akanga achangobva nyaya imwe SEC vatevedzere chiito pamusoro kutadza kuchengeta mutengi mari.
In March 2018, ari SEC mhosva nezvimwewo ne "kakawanda kuisa vatengi yesangano pangozi."
The SEC mhosva nezvimwewo nokuva "zvisiri pamutemo akaisa kudarika $25 mamiriyoni makasitoma 'kuchengetedzeka pangozi kuitira kuti mari pachake remapazi ayo. "
Zviito kutyora urongwa ari Customer Protection Rule kuti rinoda zvaichengeta kuramba mumuviri pfuma kana kudzora mutengi midziyo. Nezvimwewo pakupedzisira akabvuma kubhadhara $80,000 chirango pasina Kubvuma kana kuramba mhosva kuti SEC raMwari.
Binance inozivisa yakachengeteka twa mari vanoshandisa (Grid) mu syscoin chiitiko nemigumisiro
Mukusarudza cryptocurrency Exchange ichangopfuura Binance akazivisa kusikwa mukomana aishandisa kuchengeteka mari inonzi "Kuchengeteka Chakanaka Fund For Users (Grid)"Mu Pashure kutengesa hadzina kufambiswa zvakanaka kuti akaona kamwe User tenga rimwe Syscoin (SYS), ukoshi pamusoro $0.26, nokuti nerokuti $625,000 muna Bitcoin.
Binance kuti chiziviso mashoko kuti unenge rollback zvose kwemashifiti zvakaenda, uye ripa avo isakarurama kukanganiswa tichivapa razero-muripo kutengesa pakati July 5 uye 14. dzimwe Binance vanozvishandisa All achagamuchira 70% rebheti vanobhadharwa BNB ari kutengesa mari inobhadharwa munguva iyi.
Bermuda vangagadzirisa rwezvemabhengi chiito nyasha blockchain startups
Hurumende Bermuda ari nekugadzirisa kuti Banking Act kuumba boka idzva Bank zvakananga kuti tigutse zvido omunzvimbo fintech uye makambani blockchain.
Bermuda Premier uye gurukota rezvemari David Burt akati:
"Kubudirira fintech Indasitiri wacho munyika yose hunobva pakugona vemabhizimisi kushanda muchadenga ichi kunakidzwa zvakakodzera rwezvemabhengi mabasa.”
Binance Exchange halts deposits / withdrawals pakati vanofungidzirwa Hack, anoti rechengetedzo
World pakukura cryptocurrency Exchange Binance ane yakaganhuka deposits uye withdrawals vanoti hurongwa kuvariritira uye ndiwedzere. Support Chikwata inoti mari zvose takachengeteka, Zvisinei vamwe vanhu akamutsa zvaimunetsa sezvo 7000 BTC rave kushumwa kutorwa kubva Binance kwakaita chando okuchengetera chikwama chete yapfuura.
Bitcoin mutengo vakaburuka $150 pamusoro nhau, achiratidza musika kusava nechokwadi.
Kraken Daily Market Mushumo 03.07.2018
$94.6M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
pamusoro 5 Performers This Week, BA...
pamusoro 5 Performers This Week, BAT Price, BSV Drama Continues, Rakuten Crypto – Bitcoin News